ဒီ (၄) ချက်နဲ့ ကိုက်ညီနေရင်တော့ သင့်ချစ်သူဟာ သင့်အပေါ် တစ်သက်လုံး သစ္စာရှိမယ့်သူပါ...! - Thadin
[ April 21, 2019 ] အဆုတ်မှိုစွဲရောဂါ ကနေ ဦးနှောက်အမြှေးေ၇ာင်ရောဂါ ဘယ်ကနေစဖြစ်လဲ…! HEALTHY
[ April 21, 2019 ] အစ်ကိုအရင်းက ညီမကို မူးလာတိုင်း ဓါးထောက်မုဒိန်းကျင့် ဗိုက်ထွက်လာမှသိရ…! NEWS
[ April 21, 2019 ] ရေးထားတဲ့ စာသားတွေက ဖတ်မိသူတိုင်း “တောက်”ခေါက်သွားစေနိုင်တယ်…! KNOWLEDGE
[ April 21, 2019 ] သင့်ဗိုက်အဆီကျစေသည့်အပြင် ဆယ်နှစ်စာနုပျိုသွားစေမယ့် သဘာဝဖျော်ရည်…! KNOWLEDGE
HomeRELATIONSHIPဒီ (၄) ချက်နဲ့ ကိုက်ညီနေရင်တော့ သင့်ချစ်သူဟာ သင့်အပေါ် တစ်သက်လုံး သစ္စာရှိမယ့်သူပါ…!
ဒီ (၄) ချက်နဲ့ ကိုက်ညီနေရင်တော့ သင့်ချစ်သူဟာ သင့်အပေါ် တစ်သက်လုံး သစ္စာရှိမယ့်သူပါ…!
February 10, 2019 Kay Kay RELATIONSHIP Comments Off on ဒီ (၄) ချက်နဲ့ ကိုက်ညီနေရင်တော့ သင့်ချစ်သူဟာ သင့်အပေါ် တစ်သက်လုံး သစ္စာရှိမယ့်သူပါ…!
ဒီအချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီနေရင် သင့်ချစ်သူက တစ်သက်လုံး သစ္စာရှိသွားဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေပါပြီ
ဒီခေတ်ထဲမှာ အချစ်စစ်ကို ရှာတွေ့ဖို့ ခက်သွားပါပြီ။ ရည်းစား ဘဝကနေ လက်ထပ်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့ သူတွေကို တွေ့ရတာ ကြည်နူးစရာပါပဲ။ စုံတွဲတွေကြားမှာ သစ္စာရှိတယ် ဆိုတာ ရှားပါးပါတယ်။
လူတစ်ယောက်အပေါ် သစ္စာရှိတယ် ဆိုတာ မကောင်းတဲ့အရာ မဟုတ်ပါဘူး။ သစ္စာ ရှိခြင်းဟာ ဘဝကို ပိုပြီး လှပစေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် သင်တကယ် ယုံကြည်ရပြီး သင့် တစ်ယောက်တည်းသာ ချစ်တဲ့သူကို တွေ့ရင်တော့ တစ်သက်တာ သစ္စာရှိဖို့ တွေဝေမနေပါနဲ့တော့။
1. သင့်အပေါ် မြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့ ချစ်တယ်။
သူ့ဘဝရဲ့ စက္ကန့်တိုင်းဟာ သင့်အတွက် အဆင်သင့် ဖြစ်နေတယ် ဆိုရင် သင့်အပေါ် တစ်သက်လုံး သစ္စာရှိမယ့် သူပါ။ သူ့ဘဝရဲ့ အချိန်တွေကို သင့်ထံပေးရမှာ ပျော်နေတာပါ။ သင်နဲ့စကားပြောရတာကလွဲပြီး တခြား အရာတွေကို စိတ်မဝင်စား တော့တာပါ။
2. သူ့ဘဝနဲ့ ရင်းပြီး သင့်ကို ချစ်တယ်။
သူ့တစ်ဘဝလုံးကို သင့်ထံ ပေးထားတဲ့သူဟာ သင့်ကို တကယ်ချစ်ပြီး ကာကွယ်ပေးသွားမယ့်သူပါ။ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေကို သင်နဲ့အတူ ကုန်ဆုံးဖို့ ဘယ်အရာနဲ့ မဆို အာမခံပေး နိုင်ပါတယ်။ သူ့ဘဝရဲ့ အနာဂတ် အစီအစဉ်တိုင်းမှာ သင် ပါဝင်ပါတယ်။
3. သင့်အပြုံးက အရေးကြီးပါတယ်။
သင့်ကို နာကျင်အောင် လုပ်မိလို့ စိတ်မကောင်း ဖြစ်ပြီး မအိပ်နိုင် ဖြစ်သွားတဲ့သူကို ယုံကြည်လို့ရပါတယ်။ အိပ်ယာ မဝင်ခင်မှာ သင့်ကို ပြုံးသွားအောင် လုပ်နိုင်တဲ့သူက သင့်ကို ဘယ်တော့မှ စိတ်အနှောင့်အယှက် ပေးမယ့်သူ မဟုတ်ပါဘူး။
4. သင့်ရည်မှန်းချက်တွေ ဖြစ်မြောက်လာအောင် တိုက်တွန်းတယ်။
သင့်ဘက်က နားလည်မှုပေးတဲ့အခါ သူ့ဘက်ကလည်း တစ်ဘဝစာ ကတိတွေပေးဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေပါပြီ။ သူ့ပျော်ရွှင်မှုအတွက် သင်ဘာမဆို လုပ်ပေးမယ် ဆိုတာလည်း သူသိပါတယ်။အဲဒီအခါ သင့်ရည်မှန်းချက်နဲ့ သူ့ရည်မှန်းချက်တွေက ထပ်တူထပ်မျှ အရေးကြီးတယ် ဆိုတာ သူ သဘောပေါက်သွားပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် သင့်ရည်မှန်းချက်တွေ ဖြစ်လာအောင် တိုက်တွန်းအားပေးမှာပါ။
ဒီအခကျြတှနေဲ့ ကိုကျညီနရေငျ သငျ့ခဈြသူက တဈသကျလုံး သစ်စာရှိသှားဖို့ အဆငျသငျ့ ဖွဈနပေါပွီ
ဒီခတျေထဲမှာ အခဈြစဈကို ရှာတှဖေို့ ခကျသှားပါပွီ။ ရညျးစား ဘဝကနေ လကျထပျဖို့ အဆငျသငျ့ဖွဈနတေဲ့ သူတှကေို တှရေ့တာ ကွညျနူးစရာပါပဲ။ စုံတှဲတှကွေားမှာ သစ်စာရှိတယျ ဆိုတာ ရှားပါးပါတယျ။
လူတဈယောကျအပျေါ သစ်စာရှိတယျ ဆိုတာ မကောငျးတဲ့အရာ မဟုတျပါဘူး။ သစ်စာ ရှိခွငျးဟာ ဘဝကို ပိုပွီး လှပစပေါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ သငျတကယျ ယုံကွညျရပွီး သငျ့ တဈယောကျတညျးသာ ခဈြတဲ့သူကို တှရေ့ငျတော့ တဈသကျတာ သစ်စာရှိဖို့ တှဝေမေနပေါနဲ့တော့။
1. သငျ့အပျေါ မွတျမွတျနိုးနိုးနဲ့ ခဈြတယျ။
သူ့ဘဝရဲ့ စက်ကနျ့တိုငျးဟာ သငျ့အတှကျ အဆငျသငျ့ ဖွဈနတေယျ ဆိုရငျ သငျ့အပျေါ တဈသကျလုံး သစ်စာရှိမယျ့ သူပါ။ သူ့ဘဝရဲ့ အခြိနျတှကေို သငျ့ထံပေးရမှာ ပြျောနတောပါ။ သငျနဲ့စကားပွောရတာကလှဲပွီး တခွား အရာတှကေို စိတျမဝငျစား တော့တာပါ။
2. သူ့ဘဝနဲ့ ရငျးပွီး သငျ့ကို ခဈြတယျ။
သူ့တဈဘဝလုံးကို သငျ့ထံ ပေးထားတဲ့သူဟာ သငျ့ကို တကယျခဈြပွီး ကာကှယျပေးသှားမယျ့သူပါ။ တနျဖိုးရှိတဲ့ အခြိနျတှကေို သငျနဲ့အတူ ကုနျဆုံးဖို့ ဘယျအရာနဲ့ မဆို အာမခံပေး နိုငျပါတယျ။ သူ့ဘဝရဲ့ အနာဂတျ အစီအစဉျတိုငျးမှာ သငျ ပါဝငျပါတယျ။
3. သငျ့အပွုံးက အရေးကွီးပါတယျ။
သငျ့ကို နာကငျြအောငျ လုပျမိလို့ စိတျမကောငျး ဖွဈပွီး မအိပျနိုငျ ဖွဈသှားတဲ့သူကို ယုံကွညျလို့ရပါတယျ။ အိပျယာ မဝငျခငျမှာ သငျ့ကို ပွုံးသှားအောငျ လုပျနိုငျတဲ့သူက သငျ့ကို ဘယျတော့မှ စိတျအနှောငျ့အယှကျ ပေးမယျ့သူ မဟုတျပါဘူး။
4. သငျ့ရညျမှနျးခကျြတှေ ဖွဈမွောကျလာအောငျ တိုကျတှနျးတယျ။
သငျ့ဘကျက နားလညျမှုပေးတဲ့အခါ သူ့ဘကျကလညျး တဈဘဝစာ ကတိတှပေေးဖို့ အဆငျသငျ့ ဖွဈနပေါပွီ။ သူ့ပြျောရှငျမှုအတှကျ သငျဘာမဆို လုပျပေးမယျ ဆိုတာလညျး သူသိပါတယျ။အဲဒီအခါ သငျ့ရညျမှနျးခကျြနဲ့ သူ့ရညျမှနျးခကျြတှကေ ထပျတူထပျမြှ အရေးကွီးတယျ ဆိုတာ သူ သဘောပေါကျသှားပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ သငျ့ရညျမှနျးခကျြတှေ ဖွဈလာအောငျ တိုကျတှနျးအားပေးမှာပါ။
“ဗန်ဒါသီး”စေ့ အကြောင်းသိကောင်းစရာ… မြန်မာပြည်က ဗန်ဒါပင်တွေ ရွှေဖြစ်ပြီ…!
သဘာဝနည်းနဲ့ ​ကျောက်​ကပ် ​ပြန်​လည်​​ကောင်းမွန်​လာ​စေနိုင်​တဲ့ နည်းလမ်း…!
This Month : 35366
This Year : 176823
Total Users : 535847
Views Today : 5866
Total views : 2423423